I-California: Usapho lweLizwe likaMama oBini lithatha i-5.9 M. Tribeca Pad - Izindlu Ezithengiswayo
Eyona Izindlu Ezithengiswayo I-California: Usapho lweLizwe likaMama oBini lithatha i-5.9 M. Tribeca Pad
I-California: Usapho lweLizwe likaMama oBini lithatha i-5.9 M. Tribeca Pad
Uxolo, Ken, kodwa awuyithenganga i-Hudson.
Xa ifayile ye- Usapho lakwaSiebel yaseCalifornia bajonge iifestile zemifanekiso yephedi yabo entsha yeTribeca, baya kuba nakho ukubona iSan Francisco-ubuncinci, ukuba indala ENew Yorker ikhava ichanekile ..
Umyeni kaJennifer Siebel usenokuba nguGavin Newsom, owayengusodolophu waseSan Francisco owayesakuba ngusodolophu kwaye okwangoku yirhuluneli ye-lieutenant yaseCalifornia (uLarry Page noSergey Brin babonelela ukuthuthwa komoya kumtshato wabo ), Kodwa lonke usapho lakwaSiebel (umama kaJennifer, utata nodade) konke malunga neNew York okwangoku: UJessica, uKenneth kwaye UJudy Siebel Kuvele iveki ephelileyo kwiirekhodi zedolophu njengabathengi bamva nje Isitalato i-250 West , El-Intengiso -ukuphucula ukuguqulwa kwe-condo yokunethezeka (loluphi olunye uhlobo olukhoyo?) e-Tribeca.
Ngenxa yokuba uKen noJudy Siebel babonakala ngathi bahlala eCalifornia, apho uMnu Siebel engusihlalo kwinkampani elawula ubutyebi eNorth Bay ngokuchaza inkampani yabucala ye-Wealth Partners, LLC, siqikelela ukuba le ndlu intsha yekaJessica, ngubani yinqununu kwiClient and Partner Group (ezi femu zezemali ziqinisekile ukuba zinendlela enamagama!) kwiziko labucala lezemali iKKR. Okanye mhlawumbi usapho lucekece-a-terre? Indawo engaphambili yamanzi intle — de kube kungenjalo.
UKenneth uza kudana akuva ukuba nangona ebambe indawo yakhe entsha, akazukukwazi ukulawula ukufikelela kuMlambo i-Hudson (onothando / ulwalamano nentiyo kunye ne-250 West: ngexesha leNkanyamba uSandy izamile ukubuyisa ipropathi. , ukulibaziseka ukuhamba komhla). Usozigidi uxelele i INew York Times ukuba watyunyuzwa buqu xa iNkundla ePhakamileyo yaseMontona yagweba ukuba yena nabanye abanini mhlaba ecaleni kweMitchell Slough kwiBitterroot Valley babengavumelekanga ukuba babiyele [lo mlambo] njengenxalenye yeendawo zabo zabucala.
Kwigumbi lokulala elinamagumbi okulala amathathu, i-3.5-bath yokuxhasa i-unit ebekwe kumgangatho wesithoba, usapho lukhusele ismidge ngaphezulu $ 5.9 yezigidi , malunga ne-50, 000 yeentloni yokubuza, kwaye bayihlawula ngokukhupha imali eyi- $ 4.3 yezigidi. (Ngenxa yokuba usapho olunzima lwezezimali phantse ngokuqinisekileyo lwalunezigidi ezimbalwa ezingaphaya, kubonakala ngathi bayabheja ukuba banokufumana imbuyekezo engcono kwimali yabo kunenzala yemali mboleko.)
Iyunithi yadweliswa ngu UErica Miller eCantor nasePecorella, owenza intengiso kumakhi. Nge-Epreli wathengisa iyunithi kolunye unxweme olusentshona-beza-mpuma, owayesakuba ngumgcini weerekhodi ze-Universal Motown Records uSylvia Rhone, owathenga igumbi elinamagumbi amathathu anexabiso eliphantsi.
I-Met Opera ifuna ukuGuqulwa, kodwa ngaba iyakwazi?
Yile nto yenziwe nguJeff Bezos ngomhla wakhe wokugqibela njenge-CEO yeAmazon
Iziqendu ze-'Narcos '8-10 Recap: IPablo Escobar Escapes Prison ukuya kwiXesha leFilimu 2
Izinto Ziwa Ngaphandle: U-Amy Herzog kaThixo Omkhulu Pan kunye noMelissa James Gibson Yeyiphi Imvano-siphelo NeMelika Ebalaseleyo, Ehambayo
uyifumana njani irekhodi lomntu lolwaphulo-mthetho
Ezona mveliso zintle ze-cbd zoxinzelelo
kwenzeke ntoni kwi flash kwi hulu
Eyona webhusayithi ithengisa urhwebo